Sandals Resorts: # backtohappy
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Resorts: # backtohappy
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
by Gianna Nolte - Shangu
hwashu nzvimbo dzekutandarira
rakanyorwa Gianna Nolte - Shangu
Idzo kurota kwekukwira nendege, kunwira pamusoro penzvimbo dzinopisa, kuzadza zuva pamahombekombe ejecha jena, uye kunakidzwa nehunhu hwehukama hwakazara zviri kuzadzikiswa - uye zvese zvakatanga ne Shangu Grande Antigua. Yakavhurika, asi kushinga kuvhura iyo yakashanda sechiedza chetariro yeramangwana rekufamba. Sandals Resorts #backtohappy haisi chete hashtag.
Tora dhipi mune ese-anosanganisira emhando yepamusoro uye zvakavanzika paSandals Grande Antigua.
Kudzokera muparadhiso, Sandals yaida kuona kuti kuvhurwa kwese kwaive kwakachengeteka sezvinobvira kune vese vashanyi nenhengo dzeboka. Ndokusaka nzvimbo dzese dzekuchengetera gumi nemasere dzakashandisa iyo Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana. Nekudzidzisa vese vashandi nekumepu runyorwa rwegumi nematanhatu ekubata, Sandals Grande Antigua aive wekutanga kuisa zvibvumirano mukuita uye kutanga kutora vaenzi kudzokera kunzvimbo yavo inofara muCaribbean.
Yakanga iri nguva yekumirira yakamirirwa kwenguva refu umo kushanya kweCaribbean kwainge kwatanga zviri pamutemo kudzoka kwayo uye Sandals Resorts yaive ichitungamira nzira, ichipa vafambi chikonzero chekutora mapasipoti avo zvakare.
Tora mapasipoti ako uye dzokera kumufaro wakachena paSandals Resorts.
Uye ikozvino, Sandals iri kupa munhu wese zvimwe zvikonzero zvekutora #BackToHappy.
12 Mahombekombe Akabatanidzwa® Mahotera akavhurwa nezvimwe kumusoro: #BackToHappy
Enda pane chero maSandals kana Beaches Resort izvozvi uye unovimbiswa kuti uwane mufaro wakachena mushure mekungotarisa kwakatenderedza. Pane kukoshesa kwakadzama kwemakungwa ebhuruu akajeka, kubuda kwezuva kwakajeka, minda yakashongedzwa zvakanaka, uye iwo madokero egoridhe eCaribbean. Mufaro unogona kuoneka uchipenya munzvimbo dzese.
Tora chigaro chegungwa uye utarise kubuda kwakajeka kwezuva pa Shangu dzekuSouth Coast neimwe hafu yako.
Mhepo yeCaribbean inotakura kunhuwirira kwezvokudya zvegungwa zvitsva pamaeka epasi epasi, makicheni emhando yepamusoro adzoka kuzoshanda achipa mamwe emaphikisheni epasirese epasirese, vakaroorana vari kudzoreredza kudanana kwavo munzvimbo dzekuchengetera dziva, uye mhuri hadzisiyi chinhu asi tsoka dzinofara mukati jecha. Zvese zvehupenyu hwomutambarakede pakupedzisira zvadzoka uye zvirinani kupfuura nakare kose.
Famba-famba-mu-ruoko uye unakirwe iyo yese yemhuri nguva pa Mahombekombe Negril.
15,000 nhengo dzechikwata: #BackToHappy
Kwese kwaunotarisa, nhengo dzechikwata dzinoonekwa dzichinyemwerera kuburikidza nemeso adzo nekuti vanofara zvechokwadi kudzoka vachiita izvo zvavanoda zvakanyanya - kuunza mutsa unoshamisa kune vashanyi. Kubva kuPadi® Certified diving varairidzi uye vakasarudzika bartenders kuenda kuRed Lane® Spa nyanzvi uye mabutiro akadzidziswa neGuild of Professional English Butlers, 'kurova kwemoyo' kweSandals ikozvino kuri kurova kwakasimba kupfuura nakare kose.
Nhengo dzeSandals nhengo dzakagadzirira kuendesa iyo 5-nyeredzi zororo iwe yawanga uchirota.
Vafudzi vane mukurumbira pasi rese vadzokera munzvimbo yavo inofara, vanodiwa bartenders vari kusanganisa yakanakisa cocktails, vatambi vari kutora varaidzo kunzvimbo nyowani (chaidzo kuvaraidza vaenzi vachiri pazvimiti), uye nezvimwe zvakawanda. Chikwata chiri kuenda pamusoro nekupfuura kuzotarisira vaenzi uye kuratidzira kungodziya kwavo kugamuchira vaeni. Isu tese tinoda R & R diki ine imwe yakavakirwa-muumbozha, uye Sandals nemaBeach vakagadzirira kupfuudza-kuendesa!
Tora rudo rwako kumatenga matsva uye umutsiridze rudo mune a Penthouse Skypool Butler Suite kuSandals Grenada.
Shamwari, zviso zvitsva uye vashanyi vakavimbika vava mhuri: #BackToHappy
Iko hakuna kuramba icho: oasis yemaviri manzwi akanaka mufananidzo-wakakwana izvozvi. Nekuti maSandals mucherechedzo unovimbwa kweanoda kusvika makore makumi mana ikozvino, vakaroorana uye mhuri dziri kutora mapasipoti avo uye kutizira kuparadhiso nekuti vari kuda kudzokera kuita izvo zvinovafadza.
Tora #BackToHappy uye unyorove rimwe zuva reCaribbean kuSandals Resorts.
Pakati penzvimbo dzese, vashanyi vanogona kuonekwa vachipembera muumbozha zvakare, vachisimudza zuva reCaribbean kubva zvavo pamhenderekedzo yegungwa-parutivi macabana, vachibatanidzana pamwe chete pamusoro pekudya kwemakenduru kwakavanzika pazasi penyeredzi, uye vachizvimisikidza pachavo pamusoro pemvura. kweaviri, uku uchisvina piña coladas. Zvese izvi zvichivaunzira #BackToHappy mukuita.
Sip pane ako aunofarira makoketi nema360-degree maonero egungwa pa Shangu dzekuSouth CoastMatanho Ekumusoro Kwemvura Bar.
Ichokwadi chinozivikanwa pasi rese kuti kufamba kunoita kuti vanhu vafare, uye maSandals nemaBeach Resorts anoda kuti munhu wese #BackToHappy. Kubva pamaresitoreti akapamhama akavakwa nehukama hwevanhu mumagariro kuenda kusevhisi isina kujairika inoisa vashanyi pekutanga, Sandals anga agara ari mutungamiriri akasimba muindasitiri yekugamuchira vaeni. Couple izvo nekubatanidzazve vashandi vayo vasingaenzaniswi nevashanyi nezvose-zvinosanganisirwa zvemutambarakede uye nzvimbo dzinonyanya kufadza pasi pano… ikozvino, ndicho chinhu chatinogona kufara tese nezvacho!
Wagadzirira kuwedzera mufaro wako uye kumutsidzira rudo rwako rweparadhiso? Dzidza zvakawanda nezve kuronga nezve zvese-zvinosanganisira zororo neSandals or Mahombekombe Resorts ikozvino.
Gianna Nolte - Shangu